Wararka - La Dagaalanka Cudurada Faafa, Gaarsiinta Waqtiga!
La Dagaalanka Cudurada Faafa, Gaarsiinta Waqtigeeda!
Iyagoo wajahaya faafida cudurka faafa ee loo yaqaan 'noval coronavirus epidemic', shaqaalaha SHEHWA waxay qaadayaan dhamaan tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo hubiyo "Kiisaska infekshanka cudurka", waxayna si aad ah isugu dayayaan inay si dhaqso leh u rartaan.
On Mar.5th, 2020, Dufcaddii TS160-3HW cagaf cagaf ah ayaa loo diray suuqa Koonfur-bari Aasiya waqtigii loogu talagalay. Bishii Febraayo 3deeda, 2019, SD6KLGP cagaf cagafyada cagaf cagafyada ah ayaa soo saaray isugeyn ku saabsan shuruudaha uu bixiyo macmiilku waxaa loo geeyay adeegsadayaasha dhammaadka ah ee suuqa Koonfur-bari Aasiya.
SD6K waa nooca wadarta cagaf cagaf cagaf leh semi-adag ganaax, tier koontaroolka elektarooniga ah Ⅲ, laba-wareegyada elektaroonigga ah xakamaynta nidaamka wadista hydrostatic, koontaroolka korontada xiran xarunta xiritaanka diraya hirgelinta nidaamka Haydarooliga.
SHEHWA waxay hirgelisaa barnaamijka hal-abuurka sayniska iyo teknolojiyadda iyadoo la raacayo istiraatiijiyad isku dhafan oo ah "Soo-saar, Daraasad, Cilmi-baaris, Xaqiijin", xallinta iyo jebinta cidhiidhiga tiknoolajiyada, hagaajinta awoodda naqshadeynta iyo kabaalka si weyn. Sannadkii 2011, SHEHWA waxay soo saartay adduunka oo horumarsan xakamaynta korontada ee SD7K
cagaf cagaf, cagaf cagaer wuxuu gaarayaa Shahaadada Alaabada Cusub ee Cusub ee Muhiimka ah iyo Abaalmarinta Sayniska iyo Teknolojiyada Gobolka. Bulldozer SD8 wuxuu gaaraa Shahaadada Ansixinta Heerka Caalamiga ah. Dib u soo celinta dhulka SD8 cagaf cagaf wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Sayniska iyo Teknolojiyada Metallurgy ee gobolka Hebei.
SHEHWA waxay u hogaansantaa falsafada suuq geynta: "Ku jihaysan suuqyada, oo diirada saareysa macaamiisha sida udub dhexaadka u ah", waxay fulisaa hawlgal isku dhafan & moodel maareyn ah oo daboolaya meherada 、 qaybaha iyo adeegyada dayactirka, si loo dejiyo hanaan si dhakhso leh uga jawaabaya oo leh hufnaan shaqo oo sarreysa, adeegyo degdeg ah. SHEHWA waxay aasaastay in kabadan 30 laamood guud ahaan Shiinaha, waxayna aasaastay iskaashi istiraatiiji ah & iskaashi mudada dheer leh in kabadan 50 ganacsato xirfadlayaal ah. Shabakada suuq geynta & adeega ayaa dabooleysa wadanka oo dhan, waxsoosaarkuna sidaas oo kale ayey yeelaan, waxaana loo dhoofiyaa Russia, South-America, Africa, Middle-East region iwm, wadar ahaan in kabadan 90 dal iyo gobol, waxayna dhisteen iskaashi istiraatiiji ah iyo iskaashi fog ganacsatada deegaanka.
SHEHWA waxay raaci doontaa mabda'a gebi ahaanba barnaamijyada, si isdaba joog ah & tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah leh leh, si sare loogu qaado horumarinta shan warshadood oo ku lug leh mashiinada dhismaha 、 mashiinada macdanta, mashiinada qodista & ilaalinta deegaanka 、 shubka & qeybaha muhiimka ah 、 birta qoto-dheereynta iwm. oo dadaal badan u samee si ay u been abuurto SHEHWA oo u noqota shirkad soo saar qalab oo casri ah oo leh booska hogaaminta-gudaha, heerka koowaad ee caalamiga ah, oo isku dhafan injineernimada 、 mashiinada macdanta all makiinadaha & ilaalinta deegaanka.
SHEHWA waxay u hogaansami doontaa falsafada ganacsiga ee "Abuur qiimo macaamiisha" si ay u fuliso adeegyada iibka kadib.